Abavelisi beZinto ezingenazintsimbi - Abathengisi basechina base China kunye neFektri
I-316 ye-Stainless Angle Bar yoKwakha
Ibha ye-engile yentsimbi engenanto inokwenziwa ngamalungu ahlukeneyo oxineneyo ngokweemfuno ezahlukeneyo zesakhiwo, kwaye inokusetyenziswa njengezihlanganisi phakathi kwamalungu. Isetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo ezahlukileyo zokwakha kunye nezakhiwo zobunjineli, ezinje ngemiqadi, iibhlorho, iitransfer zothumelo, oomatshini bokuphakamisa kunye nokuhambisa, iinqanawa, iifanitshala zeshishini, iinqaba zokuphendula, iirack container kunye neeshelfu zokugcina izinto.
Umgangatho ophezulu we-engile ye-stainless steel angle ubekiwe kumgangatho, kwaye kuyafuneka ngokubanzi ukuba kungabikho ziphene zinobungozi zisetyenziswayo, ezinje nge-delamination, isikhumba, iintanda, njl njl. Uluhlu oluvumelekileyo lokuphambuka kwejiyometri engalinganiyo ngentsimbi i-angle yentsimbi ikwacacisiwe kumgangatho, oquka ngokubanzi izinto ezinje ngokuguqa, ububanzi becala, ubukhulu becala, i-engile ephezulu, ubunzima bethiyori, njl., kwaye kuyacaciswa ukuba i-engile yesinyithi yentsimbi ayizukubona torsion.
I-201 Yentsimbi H umqadi weeBhulorho
I-201 intsimbi engenasici H umqadi yintsimbi ende enamacandelo emilo emise okwe-H. I-H yesinyithi engenasici isetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo ezahlukeneyo zokwakha, iibhlorho, izithuthi, iibakaki, oomatshini njalo njalo. Ukwenziwa kweekhemikhali zentsimbi ye-H yentsimbi yecandelo lesinyithi leloluhlu lwentsimbi esongiweyo kulwakhiwo ngokubanzi.
Pipe engenan- Stainless Pipe Ukuze Industry
Emva kokuba ityhubhu ejikeleze ityhubhu ifudunyezwa, umbhobho ongenamthungo wentsimbi ongenamthungo uya kuveliswa ngenkqubo yokuqengqeleka okubandayo, umzobo obandayo okanye ishushu eshushu. Ukujiya kobudonga bemveliso, kokukhona kuqoqosho ngakumbi kwaye kuyenzeka, kwaye ukucekiseka kobukhulu bodonga, iindleko zalo zokulungisa ziya kunyuka kakhulu.
201 Pipe Stainless Pipe Kuba Malaysia
I-201 ipeyinti yokuhombisa yentsimbi engenazingcingo ikwabizwa ngokuba yintsimbi engatyiwa kumbhobho wesinyithi kumbhobho omncinci odibeneyo. Umbhobho wesinyithi esingenasici luhlobo lwentsimbi ejikelezileyo, nesetyenziswa ikakhulu kwi-petroleum, kwimizi-mveliso yamachiza, unyango lwezamayeza, ukutya, ishishini elikhanyayo, izixhobo zoomatshini kunye neminye imibhobho yokuhambisa umbane kunye namacandelo oomatshini. Ukongeza, xa amandla okugoba kunye namandla e-torsional afanayo, ubunzima bukhaphukhaphu, ke kukwasetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni iindawo zoomatshini kunye nezakhiwo zobunjineli. Isoloko isetyenziswa njengefanitshala kunye nekhitshi.
316L 0.01mm Stainless ngefoyile ye Automobile
I-foil yentsimbi engenasici isabonakaliswa ngokubhitya, kwaye iimveliso ezincinci ziyabizwa ngokubizwa ngokuba ziifoyile. Ngefoyile ye stainless. Flat-roll ibhanti ukuziqengqa yeyona ndlela isetyenziswayo kakhulu yokuvelisa ngefoyile ye insimbi, nto leyo eye nemveliso eliphezulu, isikali kunye imveliso enkulu.
Njengoko igama lisitsho, ngefoyile ye-stainless steel kuthetha ngefoyile ye-stainless steel. Ngokwenyani, inkcazo yegama "ifoyile" ayicacanga, kwaye uninzi lweentsimbi zibizwa ngokuba ziifilili ezingaphantsi kwe-150um. Ngenxa yokuba kungekho mgangatho wefoyile engenasici, ifoyile yentsimbi eyenziwe ngentsimbi engenanto yenziwe ngephepha lesinyithi. Ngefoyile ye insimbi isetyenziselwa ukwenza spacers kumacandelo koxinzelelo oluphezulu uvakalelo kwizixhobo ngqo, izinto eziphambili zezakhiwo kunye nezinto ubushushu utshintshiselwano iinjini umphunga iinjini, njl
301 Stainless U ijelo Ukwakha
I-301 ye-U engenazintsimbi U ngumjelo wentsimbi kunye necandelo lomnqamlezo omile okwe-groove, izinto zesitishi esingenasici esinezixhobo ezisetyenziswa kakhulu kwimveliso yentsimbi engenasici zezi: 201, 202, 301, 304, 321, 316, 316l, kunye nezinto ezizodwa zingenziwa ngokweziqhelo .
201 Ikhoyili yentsimbi ene-2B umphezulu
Ikhoyili yentsimbi engama-304 engenazintsimbi iveliswa kuqala kwiizilebhu, emva koko zibekwa ngenkqubo yokuguqula kusetyenziswa isixhobo sokusila se-Z, esiguqula islabha ibe yikhoyili ngaphambi kokuqhubeka kokuqengqeleka. Ezi coil zibanzi zenziwa ngeenxa zonke nge-1250mm (ngamanye amaxesha zibanzi kancinci) kwaye zaziwa njenge 'coil edge coil'.